Ergayga Qaramada Midoobay U Qaabilsan Somaliland Iyo Somalia Oo Hargeysa Imanaya + [ Ujeedkiisa Iyo Cida Uu La Kulmi Doono ] – Ilays News
Ergayga Qaramada Midoobay U Qaabilsan Somaliland Iyo Somalia Oo Hargeysa Imanaya + [ Ujeedkiisa Iyo Cida Uu La Kulmi Doono ]
Hargeysa (Ilays-News):- ) Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Somalia Amb Nicholas Haysom ayaa la filaya in uu yimaaddo magaalada Hargeysa si uu kulan ula qaato madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabd.
Warar xogogaal ah oo wargeyska Geeska Afrika ka helay socdaalka Danjire Nicholas ayaa sheegaya in uu madaxweyne Biixi kala hadli doono arrimo ku saabsan xidhiidhka siyaasadeed ee Somaliland iyo Somalia siiba colaadda Tukaraq iyo wada hadalladii labada dhinac iyo doorka xafiiskiisu ka ciyaari karo. Sidoo kale waxa suuro gal ah in uu arrimaha doorashooyinka kala hadlo madaxweyne Biixi.
Sidoo kale waxa socdaalka danjiraha cusub qayb ka ah is barasho iyo in la xoojiyo xidhiidhka Somaliland iyo Qaramada Midoobay maaddaama ay jireen madmadow soo kala dhex galay ergaygii xilka uga horeeyay iyo Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa danjirihii hore Michael Keating ka dacweeyay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres isaga oo ku eedeeyay in uu la saftay xukumadda Muqdisho intii ay taagnayd xiisadda Tukaraq oo ah arrin siyaasi ah oo u dhexeysa labada dhinac. Sidoo kale Soomaaliya ayaa tiraba laba jeer dacwad ka gudbisay Mr Keating iyada oo lagu eedeeyay in uu mucaaradka dhegaysto, islamarkaana xasarado aan jirin caalamka u sheego.